GURYAHA WAXTAR LEH IYO ISKA HORIMAADYADA BOCORKA - PUMPKIN
Pumpkin: Waxyaabaha kiimikada iyo qiimaha nafaqada
Pumpkin - warshad sanadeed ama perennial ah ee khudradda cireedka. In kasta oo xaqiiqda ah in bocorku gabi ahaanba aan qabyo ahayn ee daryeelka, waxay adkaysaa xaaladaha cimilada, xaaladaha cimilada, cudurada iyo cayayaanka, waxay ku koraan beerta oo dhan iyo siinaysaa dalag weyn, dhirta waa keydo muhiim ah oo wax ku ool ah.
Miraha Pumpkin waxaa ku jira waxyaalahan faa'iido leh:
Ma taqaanaa? Pumpkin kuma jirto walxaha kolestaroolka oo dhan, iyo xaddiga dufanka halkii 100 g oo ah badeecada waa 0, 1 g. Sidaa darteed, midhaha geedka ayaa ah mid qiimo leh oo aan lahayn oo keliya xayawaan badan oo faa'iido leh, laakiin sidoo kale sababtoo ah waa cuntooyin yar-yar oo calorie ah. 100 g oo miro ah ayaa ka kooban 22 kcal, oo kaliya 0.9 kcal oo dufan ah.
Miraha geedka waxaa ku jira xajmiga fitamiin oo hodan ah:
Marka laga eego sida fitamiin oo kale ah, bucad si wanaagsan u saameeya dhammaan xubnaha iyo shaqooyinka jidhka bini'aadamka: aragga, difaaca jirka, nidaamka dareemayaasha, beerka urinogenital, beerka, caloosha, mindhicirrada, maqaarka, xinjirta dhiigga, dheefshiidka. Lama yaabin bamku uu leeyahay antibiotics dabiici ah.
Qiimaha nafaqada ee 100 g ee badeecada:
biyaha - 91, 8 g;
dheef - 2 g;
borotiinka - 1 g;
baruurta - 0. 1 sano
Pumpkin waa in lagu daraa cuntada dietetics, sida, hal dhinac, waxaa ku jira dufan aad u yar, iyo dhinaca kale, waxay buuxin doontaa jirka oo leh fitamiinada lagama maarmaanka ah, xoojinta nidaamka difaaca.
Waa muhiim! Qodobbada lagu sharraxay ee xubnaha iyo fitamiinada waxay leeyihiin noocyo bocorka miiska. Balaastigga qurxinta iyo dabiiciga ah waxay leeyihiin waxyaabo kala duwan oo kiimikaad ah mana ku jiraan guryaha dawooyinka.
Qalabka farmashiyaha ee bocorka, diyaarinta ku salaysan bocorka ee daawada casriga ah
Pumpkin waxaa si fiican u nuugay jidhka. Nidaamka dheefshiidka wuxuu qiyaastii laba saacadood. Ka dhex baxa mindhicirka iyo habdhiska kaadida. Pumpkin kuma jiraan wax walxo waxyeelo leh, jidhka kuma xirna jajab. Taas bedelkeeda, mid ka mid ah sifooyinka kiimikada ee baaliga ah waa in ay si firfircoon u kor u qaadida tirtiridda tufaaxa iyo sunta.
Balaastigga da'yarta si fiican ayuu u socdaa iyada oo ku dhowaad dhammaan cuntooyinka cuntada. Miraha dambe laguma talinayo in lagu wada isticmaalo hilibka, miraha, tufaaxa, digirta cagaaran.
Qalabka daawada ee bocorka ee jirka bani'aadamka ayaa si firfircoon loogu isticmaalaa daawada dhaqanka iyo dhaqanka. Farmashiyaha waxaad arkeysaa daawooyin badan oo ku salaysan bocorka, oo ka mid ah:
Saliid shinni ah;
Daawooyinkaan badankood waxay leeyihiin waxyaabo ka hortag ah, bakteeriyo, daaweyn, duriinka duriinka. Waxaa loo isticmaalaa qanjirka 'prostatit', cudurada urojiinka, mareenka caloosha, beerka. Saliida shimbiraha ah waxaa sidoo kale loo isticmaalaa si loo ilaaliyo lana cesho qummanaanta muuqaalka.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira xaddi badan oo nafaqo ah oo ku salaysan bocorka, taas oo loo isticmaalo sidii sedative, si looga hortago cudurada neoplastic.
Waa muhiim! Nooca ugu caansan ee cuntada leh bocorka waa boorash bocorka leh caanaha. Si kastaba ha noqotee, bocorka waa mid liidata caanaha iyo miro. Sidaa darteed, Boorashka noocan oo kale ah, oo ka soo horjeeda ra'yiga dheer ee ku saabsan faa'iidadiisa, waxaa si xun u nuugaya jidhka, culeyska caloosha, caanaha ayaa ka hortagaya nuugista bocorka iyo maaddooyinka waxtarka leh ee jirka.
Guryaha bogsoon ee bocorka ayaa si ballaaran loo isticmaalaa daawada dhaqameed. Iyadoo ay saldhig u tahay, decoctions, juices, badarka, boomaatada ayaa la diyaariyey. Mucaaradka caadiga ah ee bocorka ayaa aad u faa'iido badan, oo aad u baahan tahay inaad qallajiso - daroogada ayaa diyaar u ah cudurro badan.
Waa maxay sababta bocorka faa'iido leh?
Maaddaama ay ka kooban tahay qadar weyn oo ah maaddooyinka waxtar leh iyo kooxaha fitamiinada, bocorka ayaa leh sifooyin badan oo faa'iido leh. Haddii aad xiiseyneyso waxa hantida baaliga ah, halkan waa liistada kuwa ugu waaweyn:
waxay ka caawisaa hagaajinta wareegga dhiigga;
wuxuu xoojiyaa derbiyada murqaha iyo murqaha wadnaha;
waxay caadi u tahay samaynta unugyada dhiigga;
waxay ka caawisaa in laga takhaluso Gooryaanka;
Waxay hagaajinaysaa is-beddelka;
Saameynta wanaagsan ee maqaarka.
On su'aasha ah in bocorka yahay durayo ah, jawaab sax ah waa haa. Iibkani wuxuu ka mid yahay shanta hogaamiye ee khudradda leh hanti. Tan waxaa lagu sharaxay macnaha sare ee kalsiyum, magnesium, iyo potassium miraha miro.
Pumpkin waa la dubi karaa, la dubay oo la dubay. Marka la shiilayo, bocorku wuxuu lumiyaa badi sifooyinka wanaagsan. Laakiin casiir bocorka waa ili aad u qiimo badan oo fitamiino iyo xubno muhiim u ah qof.
Guryaha waxtarka leh ee miraha
Abuurka Pumpkin waa hodan ku ah Zinc. Tani waxay sharraxaysaa inta badan bogsashada guryaha miraha bocorka. Waxaa intaa dheer, waxay ku sumoobeen borotiinno, fitamiino A, B, C, E, D, K, birta, kalsiyum, potassium, magnesium, fosfooraska, amino acids iyo ashyaha dufanka leh.
Waxaa lagu taliyey in la isticmaalo vegetarians iyo dadka ku jira cuntada, maadaama ay bedelayaan nafaqooyinka ku jira hilibka iyo ukunta.
Abuurka Pumpkin wuxuu leeyahay sifooyinka daaweynta soo socda:
xoojinta ciddiyaha, timaha;
ka hortag maqaarka iyo qalajinta;
caadi ahaan qoynta hormoonada jinsiga;
waxay gacan ka
hagaajinta shaqeynta ukumaha;
dhiirrigelinta nadiifinta maraakiibta dhiigga;
Dheecaan ka qaadista kolestaroolka jirka;
yeeshaan saameyn jilicsan caloosha;
xakamaynta lallabada inta lagu jiro xanuunka sambabada iyo jirada;
Diirad gaar ah ayaa la siiyaa awooda miraha bocorka si si wax ku ool ah looga saaro jirka bini-aadamka ee dirxiga. Wixii burburinta dulinyada isticmaalaya bambo, miraha waxaa loo isticmaalaa usbuuca oo dhan, 100 g on calool madhan subaxdii, oo leh qadar yar oo biyo ah. Abuurka la jajabiyey waa mid caafimaad leh oo nabarka wacan. Si arrintan loo sameeyo, waxay ku dhalaali jireen hoobiye ama la jajabiyay qashin, ku faafay cheesecloth waxayna codsatay boogta.
Abuurka Pumpkin waxaa si weyn loogu isticmaalaa daaweynta prostatitis. Aagga, Prostoror iyo Prostamed waa la yaqaan - diyaarinta bocorka bocorka kaas oo gacan ka geysanaya ka-hortagga prostatitis iyo hagaajinta awoodda.
Inkasta oo saameyn ballaaran oo daaweyn ah, saxarada bocorka iyo miraha ay leeyihiin qaar ka mid ah khilaafaadka in la isticmaalo, kuwaas oo ay ka mid yihiin:
boogta boogta ah ama boogta xiidmaha;
oo leh astaamaha kordhaya ee casiirka caloosha;
Waa muhiim! Abuurka ugu faa'iidada leh ee aan si fiican loo daaweyn. Waxaa lagula talinayaa in ay qallajiyaan dhowr maalmood oo qorraxda ka mid ah isla markiiba isticmaalka ka hor.
Waa maxay sababta dhirta bocorka faa'iido leh?
Jirka boogaha waa la cuni karaa mid cusub, sidoo kale waxaa la dubay, la kariyey, la kariyay. Kufsashada laguma talinayo sababtoo ah sheyga ayaa lumiya guryaha guryaha. Tilmaamaha faa'iidada leh ee saxarada waxaa ka mid ah:
hagaajinta xaddiga kolestaroolka;
wuxuu kor u qaadayaa bogsashada boogaha caloosha;
waxaa ku jira xaddi badan oo folic acid ah;
ku kobcay birta oo saameyn ku leh sameynta unugyada dhiigga;
waxay ka caawisaa in laga takhaluso sunta jirka.
Intaa waxaa dheer, sifooyinka bogsiinta bocorka beerka waa mid aad u qiimo badan. Qufaca ilmaha caloosha ayaa kor u qaadaya ka saarista sunta sunta iyo sunta sunta. Sumbada Pumpkin waxaa sidoo kale loo isticmaalaa gubashada, canbaarta, dermatiga, sida boogta bogsashada nabarka.
Ma taqaanaa? Sumbada Pumpkin waxay leedahay saameyn waxtarka leh ee kudubyada. Qashinka cusub ee la jajabiyey waxaa lagu dabaqayaa meelo xanuun, kadibna dhibbanaha ayaa dareemi doona gargaar weyn.
Faa'iidooyinka cabbitaanka cabitaanka bocorka
Casiirka Pumpkin waa mid si dhab ah u leh maaddooyinka waxtarka leh, sifooyinka bogsashada waxaa kaliya oo laga xishoodi karaa. Casiirka furuutka wuxuu ku kobcayaa fawaakih, birta, magnesium, kalsiyum, potassium, beta-carotene, fitamiin B, C, E. Cuntadani waxay xoojisaa nidaamka difaaca waxayna saameyn ku leedahay dhamaan xubnaha.
Casiirka Pumpkin wuxuu leeyahay sifooyinka bogsashada soo socda:
waxay xoojisaa ciddiyaha iyo timaha;
nadiifiyaa qashinka iyo beerka sunta;
Waa muhiim! Casiirka Pumpkin wuxuu leeyahay saameyn dhaaqo xoog leh. Dadka qaba dhagxaanta waaweyn ee kelyaha ama kaadiheystu waa inay u isticmaalaan sheygan iyada oo taxadar leh oo kaliya ka dib markay la tashanayaan dhakhtar. Maadaama dhaqdhaqaaqa dhagaxyada waaweyn ee saameynaya duriinka joogtada ah uu keeni karo joojinta wadooyinka kaadida ama choleretic.
Sababtoo ah heerka sare ee fiitamiinada iyo walxaha faa'iido leh, bocorku wuxuu leeyahay sifooyin badan oo daaweyn ah waxaana loo adeegsanayaa dhaqanka iyo sidoo kale daawada dhaqameedka, cosmetology.
Isticmaalka bocorka ee daawada waxaa lagula talinayaa cudurada sida:
oo leh cystitis, nephritis, pyelonephritis;
cabsi ku jirto colitis;
hagaajinaysaa dheefshiidka iyo geeddi-socodka dheef-shiid kiimikaad ee cudurada marinka mindhicirka;
sida diiqad u leh niyadjabka;
ee cudurada dhiig karka iyo cudurrada wadnaha;
hargabka, infekshannada fayraska ee neef-qabta oo ah neef-ba'an iyo xoojinta difaaca jirka;
iyada oo la yareeyo muuqaalka muuqaalka;
si looga hortago kansarka;
qaba cudurrada beerka;
In berriga of cosmetology, bocorka waxaa loo isticmaalaa in lagula dagaallamo cudurada sida:
Ma taqaanaa? Waxaa si caan ah loo xaqiijiyay in bacriminta miraha taageeraan jinsiga ragga iyo in ay gacan ka geystaan ​​kordhinta awoodda.
Miyaan isticmaali karaa mashiinka uurka leh
Pumpkin loogu talagalay haweenka uurka leh waa mid aad u faa'iido leh. Ugu horreyn, waxay kor u qaadeysaa qaadista sunta iyo kolestaroolka, taas oo si fudud u fududeyneysa dheef-shiid kiimikaadka hooyooyinka. Casiirka Pumpkin wuxuu ka caawiyaa calool-fadhiga iyo caloosha. Intaa waxaa dheer, badeecadani waxaa lagu farsameeyaa folic acid, taas oo lagama maarmaan u ah sameynta uurjiif caafimaad leh.
Casiirka iyo kabuubka ayaa xoojiya nidaamka difaaca jirka, taas oo dhab ahaantii aad muhiim ugu ah caafimaadka dumarka uurka leh. Tani waa daaweyn aad u fiican oo ah bararka, barar kelyaha iyo kaadiheysta. Pumpkin ayaa badbaadin doonta hooyada mustaqbalka matag xanuun leh inta lagu jiro sunta sunta, caloosha.
Waa muhiim! Qaar ka mid ah dumarka uurka leh waxay xasaasiyad ku leeyihiin carotene, taas oo hodan ku ah bocorka. Haddii aad dareento fal-celin xasaasiyadeed (cuncun, finan, calool xanuun) waa ineey diidaan alaabta. Abuurka Pumpkin waa in aan loo isticmaalin haddii ay dhacdo calool-fadhiga.
Sida loo doorto bocorka
Balka bucshiradu wuxuu leeyahay hanti daweyn hodan ah. Midabkeedu waa mid dhexdhexaad ah oo leh midab khafiif ah. Si aad u doorato bocor fiican, waa inaad raacdaa talooyinka soo socda:
dooran miro yar (illaa 5 kg), waxay noqon doontaa mid ka sii fiican oo faa'iido leh;
midhaha bislaaday waxay leedahay qallajin qoyan, maqaar cufan oo leh qaab muuqaal leh;
on dusha sare waa in aan noqon lebbiska lowska, dayrka iyo waxyeelo kale;
orangeer ah qoyan ee bocorka, faa'iido badan oo ay tahay;
Ha iibsanin googo gooyo, si fiican u waydiiso inaad gooyso qiyaasta midabtada saxda ah.
Ma taqaanaa? Marka aad iibsanayso gabal la jarjaray, hubi inaad tijaabiso abuurka - waa in ay ahaato mid bisil, ballaaran, oo aan dhadhan lahayn. Qashirku waa inuu noqdaa mid jilicsan. Tilmaamayaasha noocan oo kale ahi waxay tilmaamayaan in gabalkii laga jaray midho bisil oo wanaagsan.
Pumpkin: waxyeelo iyo khaldan
In kasta oo xaqiiqda ah in bocorka ay ku jiraan nafaqooyin badan iyo fiitamiin, waa wax soo saar cunto, waxaa jira dhowr waxyaalood oo la isticmaalo. Kuwaas waxaa ka mid ah dulqaad la'aan shakhsi ahaaneed iyo cudurrada qaarkood.
Liisku wuxuu liistaa cudurrada aan cuni karin bocorka:
acidity kordhiyay casiir gastric ah.
Intaa waxaa dheer, waa in aadan cunin wax badan oo ka mid ah badeecada, maadaama ay tani keeni karto fuuqbax, xanuunka caloosha iyo mindhicirka, finan xasaasiyadeed.
Sidaa darteed, bocorka waa ilaha qiimaha fitamiinada iyo nafaqooyinka, waxay leedahay saameyn ballaaran oo daaweyn ah. Si kastaba ha noqotee, ka sii darsiga badeecada iyo isticmaalka, ee liddi ku ah khatarta, waxay dhaawici kartaa caafimaadkaaga.